BAARIS aad u dheer oo ay sameeyeen dad ku taqasusay arimaha qurba joogta caruurta Somalida ayaa warbixin kooban ka soo saartay,iyadoo la ogaaday sababaha keena in caruurta Somalida ay qaabka dhaqan xumida iyo halista ah ee GAANGITARNIMADA ay ku noqdaan siyaabaha hoos ku qoran:
1- QOYSKA UU KA DHASHAY/DHALATAY OO KA KOOBAN CARUUR KA BADAN 5
2- GURI AABE AAN JOOGIN
3 - XAAFADA AY KU DHASHAAN AMA KU KORAAN
4 - DUGSIGA AMA ISKUULKA AY DHIGTAAN
5 - SAAXIIBKA AY YEESHAAN
Boqolkiiba 85% waa wiilasha Somalida kuwa dhaqanka halista ah ee GANGESTERNIMADA ku biira ama noqda,waxaana ku qasba lumida xiriirka qoyska "Communication" caruurta iyo waalidka oo aan saaxiib noqon.
Aad ayay u adag tahay qoys Somali ah oo ka kooban HOOYO iyo 7 caruur in ay si raaxo leh ugu noolaadan guri ku yaala TORONTO - LONDON - STOCKHOLM ama MINNEAPOLIS,hooyooyinka oo inta badan caruurta gacanta ku haya ayaa waxaa dhib iyo rafaad ay ku tahay in ay isha ku hayaan caruurta ay koriyaan,iyadoo inta badan qoysaska Somalida ee qurba joogta ay u badan yihiin guri HOOYO iyo CARUUR keliya ah ay joogaan.
Qubarada waxaa kale oo ay sheegeen in waqtiga ugu muhiimsan ee caruurta la doonayo in tarbiyada la baro ay tahay inta u dhexeysa 7 ilaa iyo 17,caruur qurba ku dhalatay oo og xaquuqda iyo sharciyada wadanka ay ku noolyihiin wey adag tahay in aad ula dhaqantid si iyadoo lagu nool yahay SOMALIA oo kale.
Qaladka ugu weyn ee waalidka qurba jooga ah uu sameeyo waa JIR DILKA,arintaa oo ah waxyaabaha ugu badan ee caruurta ay guryaha uga cararaan,taasoo keenta in ay si toos ah gacanta ugu galaan dadka baraya dhaqamada foosha xun.
Caruurta da'doodu ay u dhexeyso 7 ilaa iyo 17 jir laguma hayn karo 24 saac guryahan ciriiriga ah ee qurbaha,taasoo keenta in ay heli waayaan waqti ay wax ku bartaan ama nasasho fiican ay ku helaan,waayo reerka waa 9 ku wada nool guri 4 qol ah,aad ayay u adag tahay in waqti ku filan ay helaan,taasoo ku qasbeysa in xaafadaha iyo meelaha ay GANGISTARADA joogaan waqti ay u arkaan mid wanaagsan ay kula qaataan.
Lacag la'aanta waa arimaha ugu weyn ee caruurta Somaliyeed ku qasabta in ay iibiyaan noocyada kala duwan ee MUQAADARAADKA ama DAROOGADA,taasoo marka dambe hadii ay sii dhex galaan u keeneysa halis,sida aan ku aragnay dilalka is dabajooga ah ee wiilasha Somaliyeed ee ku kala nool qurbaha.
Arimaha lacag la,aanta waxaa looga gudbi karaa in caruurta da'doodu aan kor ku soo xusnay mar walba waqtiyada dugisyada ay xiran yihiin ama fasaxyada lagu jiro la mashquuliyo,waqti fiican ay qoyska isla qaataan sida dalxiiska dibada loogu socdaalo.
Qaladka ugu weyn ee qoysaska Somalida ay sameeyaan waa iyagaa degan xaafad LONDON ah oo nolosheeda ay xuntahay in ay caruurta u kaxeeyaan xaafad qaraabadooda ay degan tahay ee TORONTO ku taala,arintaa ma ahan fasax ee waxaa dhaama adigoon meelna u kaxeyn.
Qoyska si ay waqti fiican isula qaataan waa in ay tagaan meel gebi ahaan ka duwan,meesha ay ku nool yihiin sida dhulka xeebaha,laakiin hadii xaafada guryaha dowlada ay bixiso ee LONDON aad ka wadid dhowr saac ka dibna isla guryaha dowlada ee STOCKHOLM aad ka dejisid wax faa'iido ah ee caruurtaa u soo kordhaya haba yaraatee ma jirto.
Dhibka ugu weyn ee caruurta Somaliyeed ku haytsa qurbaha waa AABO LA'AANTA,taasoo gurigii ay ku nool yihiin caruur fara badan AABANA aan joogin ay xaqiiq tahay in caruurtaa ka lumaan wadada saxa ah.
MAXAA KA MID AH ASTAAMAHA LAGU GARTO IN CARUURTA AY KU BIIREEN GAANGISTARADA?
1- LEBISKA IYO TIMAHA OO IS BEDELA
2- AF -CELIN IYO XANAAQ BADAN
3- DHOWR MOBILE PHONE OO AY YEESHAAN
4 - HABEEN DHAX IYO BALWADO CUSUB " SIDA SIGAARKA, SHIISHADA IYO NOOCYADA KALA DUWAN EE MAANDOORIYAHA"
5- WAXYAABO CUSUB OO QAALI AH OO AY SOO IIBSADAAN " WAA XILIGA AY BILAABAAN IIBINTA DAROOGADA"
6- IN MAALINTII OO DHAN AY QOLKOODA ISKU SOO XIRAAN "CIDNA AAN GELI KARIN"
7- ASXAABTOODA UGU BADAN OO AJINABI ISU BEDESHA
8- CUNTADA GURIGA OO AY KA GO'AAN
9 -QAABKA JIRKOODA OO ISBEDELA "CUNTO XUMIDA IYO ISTICMAALKA DAROOGADA"
10 - SANKA,DHEGAHA,CALOOSHA OO AY DURTAAN
Xaafadaha caruurta ay ku noolyihiin iyo asxaabtooda waa arimaha ugu weyn ee bedeli kara ilmaha Somalida ee qurba joogta ah,hadii reerkii uu ka waayo 100 dollar uu ku soo iibsado kabo NIKE ah,waxaa laga yaabaa in saaxiibkii uu yiraahdo waxaad heli kartaa 1000 dollar maalintii hadii aad qabatid shaqo fudud,taasoo ah IIBINTA DAROOGADA oo marka dambe isu bedesha DIL iyo dhaawac halis ah.
Tabcan waxaa jira caruur si qalad ah loo dilay ama arimo kale sabab ay u ahayd in dhibaato ay soo gaarto,laakiin inta la xaqiijiyay 100/90 caruurta SOMALIDA ee qurbaha lagu dilay waxaa sababay IIBINTA iyo ka ganacsiga DAROOGADA,taasoo keenta adigoo lacag laguugu yeesho ama ku iibiya maandooriyaha xaafad dad kale ay u xiran tahay.
Waxaa dhacda waalidka qaarkood in ay yiraahdaan DHAQAN CELIS ayaa wadankii loogu dirayaa,waa laga yaabaa caruur qaarkood in ay sameeyaan is bedel aad u weyn,laakiin caruuru da'doodu ay ka weyn tahay hadii SOMALI la geeyo dhowr bilood ka dibna laga soo celiyo wax isbedel ah haba yaraatee sameyn maayaan.
Hadii wadanka si JOOGTA ah ay u degaan waa laga yaabaa in isbedel ay ku sameyso meesha uu ku nool yahay "ENVIRONMENT"taasoo markii uu gaaro 24 sano gebi ahaan ay u bilaabaneyso nolol ka duwan tii hore oo maskaxdiisana sii korta.
Burburka qoyska waxyaabo badan ayaa keena,inta badan waxaa eeda la saaraa wadamada dhaqanka iyo diinta ay SOMALIDA kaga duwan tahay oo ay ku noolyihiin,laakiin arintaa waxaa la soo ogaaday in waxba aan ka jirin oo ay ku xiran tahay shaqsiga go'aanka burburka qoyska ay ka timid.
Caruurta SOMALIDA hadii ay ku koraan GURI WANAAGSAN oo waalid is jecel ay iskula nool yihiin, waxaa hubaal ah in ay ka badbaadaan dhibaatooyinka jahawareerka ku riday qurba joogta.
AABO guriga jooga waxba ma soo kordhinayo,hadii aanu ogayn dugsiga caruurta ay dhigtaan,imtixaanka iyo heerka wax barashada,waxyaabaha ugu weyn ee GABDHAHA da'da yar ee qurba joogta Somalida ay gurigooda uga cararaan waa iyadoo aan helin JACAYL AABAHA,kaasoo ka duwan kan HOOYADA.
SOMALIDA qurba joogta lagama yaabo in QOYS wada dhan oo DALXIIS isu raaca,sababtuna waa caruurtii oo aad u tira badan,AABIHII oo guriga ka maqan iyo qoyskii oo meelo kala duwan u kala safra.
Sida keliya ee looga hortago in CARUURTA GANGESTAR aan noqon, waa adigoo la SAAXIIBA,kala hadla wax walba,laakiin hadii caruurta ay ku weydiiyaan su'aal adag ee aad ugu jawabtid WAR AAMUS DHAQANKEENA iyo DIINTEENA ma ahan,waxaa hubaal ah in qof kale oo MUNAASAB ku ahayn uu u jawaabi doono.
Waqtiga lala qaatao caruurta waa waxa ugu wanaagsan ee qoyska ka ilaaliya in caruurta ay wada xooran ay noqdaan,laakiin hadii AABIHII uu fadhi ku dirir uu waqtigiisa qaaliga ah ku lumiyo HOOYADIINA aroos iyo ayuuto ay ka fikirto waxaa imanaya BILOWGA DHAMAADKA QOYSKA.
Qoraalkan waxaan ku soo afjarayaa waxyaabaha ay ka qoreen JARAA'IDYADA REER GALBEEDKA - waxyaabaha ay ku dhaqmaan SOMALI GANGESTERS oo iminka ah astaanta dhalinyarada qurba joogta.
Waxaa jira qoraalo aad u fara badan oo jaraa'idyada ka soo baxa wadamada reer GALBEEDKA oo SOMALIDA laga qoro, 100/85 waa arimaha GANGISTARADA iyo DAROOGADA,kaaoo saameyn ku yeeshay dhamaan jaaliyaddaha SOMALIYEED oo intooda badan ah dad daacad ah oo doonaya nolol iyo waxbarasho wanaagsan in ay caruurtooda u helaan.